special_four Archives - Page 85 of 90 -
Home > special_four (Page 85)
कालिकोटमा ५० प्रतिशत भन्दा कम रोपाई
Bishnu July 3, 2017 July 3, 2017 mophosala, special_four, मुख्य खबर	0
बिस्नप्रसाद न्यौपाने कालिकोट । अरसारको दोस्रो सातादेखि कालिकोट जिल्लामा किसानले धान रोपाई सुरु गरेका छन् । असारकै महिना खडेरी परेका कारण कालिकोटका किसानहरुले ढिलो रोपाई सुरु गरेका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा कम रोपाई भएको छ । विगतका बर्षहरुमा
गाउपालिकाको सहयोगमा दलित बस्तीलाई मिनी टिलर हस्तान्त्रण
Bishnu June 30, 2017 mophosala, special_four	0
बिस्नप्रसाद न्यौपाने कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको शान्नित्रिवेणी गाउपालिका वडा नं. ६ को विपन्न दलित बस्तीलाई मिनी टिलर हस्तान्त्रण गरिएको छ । शान्नित्रिवेणी गाउपालिकाको सहयोग, सहयोगी हातहरुको समूह साहस नेपालको सहजिकरणमा शान्नित्रिवेणी गाउपालिकाको वडा नं. ६ स्थित दलित बस्तीलाई परम्परागत कृषि प्रर्णालीलाई आधुनिकिकरण गरी उत्पादनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले खेत जोत्न प्रयोग
कालिकोटमा कालोबजारीको बिगबिगी–अध्यक्ष बानियाँ
Bishnu June 13, 2017 June 13, 2017 mophosala, special_four, मुख्य खबर	0
बिस्नप्रसाद न्यौपाने कालिकोट । उपभोक्त हित संरक्षण नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योती बानियाँले कालिकोटमा कालोबजारीको बिगबिगी रहेको बताउनुभएको छ । उपभोक्त हित संरक्षण नेपालको आयोजना, उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च कालिकोटको समन्वय तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सहकार्य मंगलबार कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम मान्ममा आयोजित उपभोक्ता सचेतना गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष बानियाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उपभोक्त
तिला एक र तिला दुई समयमै बन्नुपर्नेमा जोड
Bishnu June 10, 2017 mophosala, special_four, मुख्य खबर	0
कालिकोट । कालिकोट जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले जिल्लामा निर्माण हुने भनिएका तिला १ र तिला २ साना जलबिद्युत आयोजना जनचाहाना अनुसार समयमै बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कालिकोट जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले तिला १ र तिला २ जलबिद्युत आयोजना समग्र कर्णालीको सम्बृद्धिसँग जोडिएको बताउदै
आँखाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल
Bishnu June 6, 2017 special_four	0
बिस्नप्रसाद न्यौपाने कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ पुच्छेगाउकी ४ बर्षिया मन्सरा लुवार अहिले छोरी भएर जन्मिनुको उपहास भोगीरहेकी छिन् । २०७० साल बैशाख १० गते बुवा रने लुवार, आमा रन्जना लुवारको कोखबाट कान्छी छोरीको रुपमा जन्मिएकी मन्सरा आफ्नो आखाँमा लागेको चोटको समयमै उपचार नपाउदा अहिले मर्न
ओखलढुंगा कांग्रेसमा स्थानिय तहमा उमेदवार बन्ने आकाँक्षीको ओइरो
Palpalkhabar March 30, 2017 March 30, 2017 special_four, मुख्य खबर, राजनीति	0
ओखलढुंगा । बैशाख ३१ मा हुने स्थानिय तहको निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएसंगै ओखलढुंगामा उमेदवारहरुको चर्चा चुलिन थालेको छ । अझ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानिय तहको उमेदवारको छनौटको मापदण्ड तय गरेसंगै ओखलढुंगाका आठ स्थानिय तहमा उमेदवार बन्ने आकाँक्षीहरुको चर्चा चुलिन थालेको छ । एउटा नगरपालिका सहित ७ गाँउपालिकामा नेपाली
Palpalkhabar March 13, 2017 March 13, 2017 mophosala, special_four	0
हुम्ला, । हुम्ला जिल्लामा दुई फिट हिमपात भएको छ । गत फागुन २६ गतेदेखि लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ । सदरमुकाम सिमीकोटमा अत्यधिक चिसो बढेको छ । जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा कर्मचारी आगो बालेर बसिरहेका छन् । जाडो बढेपछि ती कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ । उत्तरी भेगका
Palpalkhabar March 9, 2017 March 9, 2017 special_four	0
काठमाडौँ, २६ फागुन । खानेपानी संस्थानले २० लिटरको खानेपानीको जार दुई हप्ताभित्र बजारमा ल्याउने भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा उत्पादन गरी प्रशोधन गरिएको पानीको जारको मूल्य रु ५२ कायम गरिएको संस्थानका कामु प्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए । संस्थानले पानी उत्पादन गरी वितरण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सबै सरकारी
एमालेको उग्र राष्ट्रवादका कारण सप्तरी घटना : सांसद कर्ण
Palpalkhabar March 7, 2017 March 7, 2017 special_four, राजनीति	0
काठमाडौँ, । नेपाली काँग्रेस सप्तरीका सांसद रञ्जित कर्णले नेकपा (एमाले)को उग्र राष्ट्रवादका कारण सप्तरी घटना भएको बताएका छन् । सांसद कर्णले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एमालेले राष्ट्रिय अभियानका लागि राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खलल पु¥याएको आरोप लगाएका छन् । उनले एमालेलाई उग्र राष्ट्रवादको नाममा अराजक गतिविधी तथा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका छन्
Palpalkhabar March 4, 2017 March 4, 2017 special_four	0
काठमाडौँ, । स्वयम्भू भगवापाउ नजिकै प्रहरी र अपहरणकारीबीच आज गोली हानाहान भएको छ । सो क्रममा प्रहरीको गोली लागि अपहरणकारी घाइते भएको र तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अमात्यले जानकारी दिए । सो समूहले गत बिहीबार नुवाकोट घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका तीनजनालाई अपहरण गरी परिवारसँग